Dabaaldega Aluminium Tilting Crucible Induction Furnacers Shirkadaha Shiinaha
Dabaal degida Aluminium Alwaaxida Xajmiga Xajmiga
HLQ Induction Qalabka Co wuxuu leeyahay xariijin dhameystiran oo ah Foornooyinka Induction ee Tilting Crucible melting Indoction si uu u dhalaaliyo Aluminium, alloy aluminium, iwm. Foornooyinka dhalaalaya waxaa la siiyaa heerkulkoodu u dhexeeyaa 600 ℃ ilaa 900 ℃ hawo qabow (ugu badnaan 1700 ℃ biyo la qaboojiyey).
Aluminium qulqulatada foornada ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa dhalaalida oo haysaa hanaan diirimaad leh oo ah Birta-dhalaalista ee birta-birta ah, sida aluminium, naxaas, zinc, macdanta, tin, cadmium iyo aluminiin kale.
Ku habboon dhammaan noocyada aluminiumka aluminiumka, qalcadaha dhinta, bastooladaha, matoorrada matoorrada, giraangiraha aluminiumka, iwm
Qalabkayaga Dillaacaya ee Crucible ayaa la siiyaa xaddiga heerkulka laga bilaabo 600 ℃ illaa 900 ℃ oo aan biyaha la qaboojin.
HLQ Qalabka Intuction Qalabka Coodh wuxuu naqshadaynta, injineerinka, iyo soosaarida Tilting Crucible Melting Induction Furnaces ilaa 1996.
Nooca aluminiumka dhalaalaya foornada aluminiumka ah, waxay ku shubtaa aluminiinta dareeraha ah iyada oo loo sii marayo qulqulaha alwaaxa, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu tuuro aluminium.
Waxay aamin ah oo lagu kalsoonaan karo ku shubista silinjiinka loo yaqaan '2 cylinders hydraulic' oo leh ku-dillaacyo dhammaad leh oo ku dhegan dusha sare.
Foornooyinka ayaa adeegsanaya qaab dhismeedka tamarta tamarta ee korantada dhoobada dhoobada ah. Kuleyl aad u yar ayaa sabab u ah kuleylka heerkulka wanaagsan. Xaraashka heerkulka badan ee heerkul ahaan badan leh, dahaarka kaydsan ee ku habboon, Nolosha dhererka dheer, soonka, fududeynta fudud.
Xeeb tayo sare leh, jimicsi kuleylka dhaqsaha badan, hufnaanta kuleylka sare, nolosha adeegga dheer.
Loogu talagalay gacanta ama robotic toosan tooska ama caaryada ama cadaadis loogu talagalay kicinta hoose ee kabka.
HLQ Qalabka Soo-Saarida Qalabka wuxuu bixiyaa foornada dareeraha aluminiyumka, kaas oo badanaa loo isticmaalo xafidaada kuleylka, ha u istaago, deganaanshaha iyo nadiifinta aluminiumka dhalaalay.
Karti sare iyo kaydinta tamarta
Karti heer kul kulul
Howlgal deggan oo lagu kalsoonaan karo
Categories Technologies Tags Aluminium Tilting Crucible Induction Furnace, Dabaal degida Aluminium, Dabaal degida Aluminium Alwaaxida Xajmiga Xajmiga, Tilting Crucible Aluminium Gelinta Furnace, Bixinta Qalabka Guryaha Post navigation
Bixinta Burbinta Burbinta Burburka Burburka